Esi emeghe Adobe Flash Player
Editor Si NhọRọ December 15,2019
Adguard extension for Opera: Mgbasa ozi mgbasa ozi kachasị ike
Enwere ike ịchọta ozi n'Ịntanet ugbu a n'ozuzu ebe niile: ọ bụ na blọọgụ, ebe nrụọrụ weebụ vidio, isi ihe ọmụma, netwọk mmekọrịta, wdg. E nwere ihe onwunwe ebe ọnụọgụgụ ya karịrị ihe niile echere. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ndị na-emepụta ngwanrọ malitere ịmepụta mmemme na tinye-ons maka ihe nchọgharị, isi nzube ya bụ igbochi mgbasa ozi, n'ihi na ọrụ a dị oké mkpa n'etiti ndị ọrụ Intaneti.
Opera Browser: Opera Turbo Mode Issu
Ntinye nke Opera Turbo mode na-enye gị ohere ịbawanye ọsọ nke iwepụta ibe weebụ yana Intanet ngwa ngwa. Ọzọkwa, ọ na-enyere aka iji zọpụta okporo ụzọ dị mma, nke bara uru maka ndị ọrụ na-akwụ ụgwọ kwa otu nke ozi ebudatara. Enwere ike ime nke a site na ịpịnye data natara site na Ịntanetị na ihe nkesa Opera kachasị.
Wepu Opera nchọgharị site na kọmputa
A ghaghị ile usoro Opera ahụ anya dị ka otu n'ime ihe nchọgharị kachasị mma ma kachasị ewu ewu. Ka o sina dị, e nwere ndị na-enweghị mmasị na ya maka ihe ụfọdụ, ha chọrọ iwepu ya. Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọnọdụ ndị na-adabere n'ụdị ụfọdụ ọrụ adịghị mma na usoro ahụ, iji malitegharịa usoro nke usoro ihe omume ahụ chọrọ nkwụsị kpamkpam na ntinyeghachi ya.
Ọrụ ope ọrụ: njehie crossnetworkwarning na Opera nchọgharị
N'agbanyeghị nkwụsi ike nke ọrụ, iji tụnyere ihe nchọgharị ndị ọzọ, njehie na-apụta mgbe iji Opera. Otu n'ime nsogbu kachasị emetụta bụ opra: crossnetworkwarning error. Ka anyị chọpụta ihe kpatara ya, ma gbalịa ịchọta ụzọ iji kpochapụ ya. Ihe kpatara njehie ka anyị chọpụta ihe kpatara njehie a.
Ihe nkiri Flash Downloader maka Opera bụ ntinye vidiyo dị mma.
Ọ dịghị ihe nzuzo na-ekpuchi vidiyo vidiyo site na ngwa weebụ adịghị mfe. Maka nbudata ọdịnaya vidiyo a nwere ndị nbudata pụrụ iche. Nanị otu ngwaọrụ ndị e mere maka nzube a bụ Flash Video Downloader extension for Opera. Ka anyị mụta otú e si arụnye ya, na otu esi eji ntinye a.
Opera Nchọgharị Nchọgharị: Ụda efu
Ọ bụrụ na tupu ụda na Intanet abụghị ihe ijuanya, ugbu a, ma eleghị anya, ọ dịghị onye na-eche na ị na-ekiri ihe ọ bụla na-enweghị isi n'ekwughị okwu ma ọ bụ ekweisi. N'otu oge ahụ, enweghị ụda site na ugbu a aghọwo otu n'ime ihe ịrịba ama nke nsogbu nchọgharị. Ka anyị chọpụta ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ụda ahụala na Opera. Ihe ngwanrọ na nsogbu usoro Otú ọ dị, ụda ụda na Opera adịghị apụta nsogbu na ihe nchọgharị n'onwe ya.
Opera nchọgharị: ịtọ Yandex dị ka mmalite peeji nke
Dika onu ogugugu si kwuo, ihe ka otutu ndi ntanetarite ntanetia ndi ntanyere otutu ihe n'acho aka na Yandex, nke dika ihe ngosi a na mba ayi meghere onye ndu uwa - Google. Ya mere, ọ bụghị ihe mgbagwoju anya na ọtụtụ n'ime ndị agbụrụ anyị chọrọ ịhụ saịtị Yandex na mmalite peeji nke nchọgharị ha.
Ezigbo Opera Ntọala Nchọgharị
Kedu onye na-achọghị ịnwale atụmatụ nzuzo nke usoro ihe omume ahụ? Ha na-emeghe atụmatụ ndị a na-akọwabeghị, ọ bụ ezie na ha na-anọchite anya ihe ize ndụ ụfọdụ metụtara ọnwụ nke ụfọdụ data, na ọnweghị ike nke nchọgharị. Ka anyị chọpụta ebe ntọala zoro ezo nke nchọgharị Opera.
Flash Player adịghị arụ ọrụ na Opera nchọgharị: ụzọ 10 iji dozie nsogbu ahụ
N'oge na-adịbeghị anya, ọtụtụ ndị ọrụ Opera amalitela mkpesa banyere nsogbu ndị a na Flash Player ngwa mgbakwunye. Ikekwe, nke a nwere ike ịbụ n'ihi na ndị na-emepe ihe nchọgharị ji nwayọọ nwayọọ achọ ịjụ iji Flash Player, ebe ọ bụ taa, ịnweta oghere Flash Player site na Opera ka emechibidoro ndị ọrụ.
Nsogbu na ịwụnye Opera nchọgharị: ihe na ngwọta
Oro Nchọgharị bụ usoro ihe nchọgharị weebụ nke dị elu nke na-ewu ewu na ndị ọrụ, karịsịa na mba anyị. Ịwụnye ihe nchọgharị a dị nnọọ mfe ma dị omimi. Ma, mgbe ụfọdụ, n'ihi ihe dịgasị iche iche, onye ọrụ ahụ anaghị arụ ọrụ a.
Nbudata mbubata n'ime Opera nchọgharị
A na-eji ibe edokọbara Nchọgharị iji nweta ngwa ngwa na nke dị mkpa maka ibe weebụ. Mana enwere ikpe mgbe ịkwesịrị ịnyefee ha site na ihe nchọgharị ndị ọzọ, ma ọ bụ site na kọmputa ọzọ. Mgbe ịbịgharịa sistemụ arụmọrụ, ọtụtụ ndị ọrụ anaghị achọ iwepụ adreesị nke ihe onwunwe ndị a na-eleta ugboro ugboro.
Opera anaghị ahụ Flash Player. Ihe ị ga-eme
Flash Player bụ otu n'ime mmemme kachasị ewu ewu na arụnyere na kọmputa ọ bụla. Na ya, anyị nwere ike ịhụ mmegharị ọchị na saịtị, gee egwu na ịntanetị, lee vidio, igwu egwu egwuregwu. Mana ọtụtụ mgbe ọ nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ, ma karịsịa mgbe njehie na-apụta na nchọgharị Opera.
Na-echekwa saịtị ahụ na ibema Opera
Mgbe mgbe, mgbe ị gara na ibe ọ bụla na Ịntanetị, mgbe oge ụfọdụ gasịrị, anyị ga-achọ inyocha ya ọzọ ka anyị wee cheta isi ihe ụfọdụ, ma ọ bụ chọpụta ma ọ dịbeghị emelite ozi ahụ n'ebe ahụ. Ma site na ebe nchekwa iji weghachite adreesị peeji nke siri ike, na ịchọ ya site na engines ọchụchọ abụghịkwa ụzọ kachasị mma.
Opera Nchọgharị: Save Express Panel
Ogwe ihe ngosi ihe nchọgharị ahụ bụ ngwá ọrụ dị mfe maka ịnweta ohere na saịtị ndị kachasị amasị gị. Ya mere, ụfọdụ ndị ọrụ na-eche echiche banyere otu esi echekwa ya maka ịnyefekwu na kọmputa ọzọ, ma ọ bụ iji nwee ike iweghachite ya mgbe mberede usoro. Ka anyị chọpụta otú ị ga-esi zọpụta usoro egosiputa nke Opera.
Nsụgharị nke saịtị ndị ọzọ na Russia na Opera nchọgharị
Ọ bụghị ihe nzuzo na Ịntanetị na-agbaso ụwa dum. Ndị na-achọ ọrụ ọhụrụ, ihe ọmụma, nkwurịta okwu na-esiwanye ike ịga ebe ndị ọzọ. Ma obughi nke obula n'ime ha zuru oke n'ile anya n'asusu ndi ozo ka ha wee nwe onwe ha n'ihe ndi ozo n'uwa.
Opera Browser: Nchọgharị Ntanetị
Mgbanwe kwesịrị ekwesị nke usoro ọ bụla maka mkpa onye ọ bụla nwere ike ime ka ọsọ ọsọ rụọ ọrụ, meekwa ka arụmọrụ nke manipulation dịkwuo elu na ya. Nchọgharị abughi kwa otu a. Ka anyị chọpụta otú e si ahazi Opera nchọgharị.
Opera Browser Interface: Gburugburu
Opera nchọgharị nwere ezigbo interface interface. Otú ọ dị, e nwere ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke ndị ọrụ na-enweghị afọ ojuju na atụmatụ nke usoro ihe omume ahụ. Ọtụtụ mgbe, nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ndị ọrụ, ya mere, chọrọ igosipụta ha n'otu n'otu, ma ọ bụ ụdị ihe nchọgharị weebụ na-emekarị na-akụda ha.
Gaa na ntọala ihe nchọgharị Opera
Fọrọ nke nta ka onye ọrụ ọ bụla nke na-arụ ọrụ mgbe ọ bụla nchọgharị ga-enweta ntọala ya. N'iji ngwaọrụ nhazi, ị nwere ike idozi nsogbu na ọrụ nke ihe nchọgharị weebụ, ma ọ bụ naanị gbanwee ya dịka o kwere mee iji dabara mkpa gị. Ka anyị chọpụta otu esi aga ntọala nke nchọgharị Opera.
Melite Adobe Flash Player ngwa mgbakwunye na Opera nchọgharị
Teknụzụ Web adịghị eguzo. N'ụzọ megidere nke ahụ, ha na-etolite site n'olu na ala. Ya mere, o yikarịrị ka ọ bụrụ na emelitebeghị ihe nchọgharị nke oge dị anya, ọ ga-egosi na ọdịnaya nke ibe weebụ adịghị mma. Tụkwasị na nke ahụ, ọ bụ nkwụnye ins-na-agbakwunye na mgbakwunye ndị bụ isi maka ndị na-awakpo, n'ihi na ọ dịwo anya ha niile mara ihe ọma ha.
Opera nchọgharị na-ebute: njehie njikọ Eriri
Otu n'ime nsogbu ndị onye ọrụ nwere ike izute mgbe ị na-egwu n'Intanet site na Opera nchọgharị bụ njehie njikọ SSL. SSL bụ akara protocol nke eji eme mgbe ị na-achọpụta asambodo nke ihe onwunwe weebụ mgbe ị na-agbanwe ha. Ka anyị chọpụta ihe kpatara njehie SSL na Opera nchọgharị, na otu esi edozi nsogbu a.
Iji "Ihe Odide nke ihuenyo" rụọ ọrụ iji mepụta screenshots na Windows 10
Anyị na-eji gam akporo dị ka nke abụọ nyocha maka laptọọpụ ma ọ bụ PC
Kọmputa ngwanrọ vidio
Iji nwetakwuo ọsọ nke Windows, ịnwere ike iwepu ọrụ ndị na-adịghị mkpa, mana ajụjụ ahụ na - ebili: olee ọrụ ndị nwere ike ịme nkwarụ? M ga-anwa ịza ajụjụ a n'isiokwu a. Hụkwa: otu esi agba ọsọ na kọmputa. Ana m arịba ama na imebi ọrụ Windows ga - abụrịrị ọganihu dị mma na arụmọrụ usoro: ọtụtụ mgbe, mgbanwe na-adịghị mfe. GụKwuo
Esi tinye 3ds max
Esi edozi faịlụ dxgi.dll